अब सिमित टिकट बाँकी रहेकाले समयमै सुरक्षित गरौँ, सोल्ड आउट भए रंगशालामा टिकट पाइँदैन
Saturday,7Dec, 2019 1:10 PM
नेपालमा यतिबेला १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद ( साग) आयोजना भइरहेको छ । अन्तरगतका विभिन्न खेल भइरहेका छन् । साग अन्तरगत फुटबल, क्रिकेट, भलिबल र बास्केटबलमा दर्शकको संख्या बढि छ । अझ फुटबल र क्रिकेटमा त दर्शक नओइरिने कुरै भएन । यस पटकको सागमा दर्शकका लागि अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले इसेवालाई टिकट विक्री तथा व्यवस्थापनको लागि नियुक्त गरेको छ । टिकटको विक्री, व्यवस्थापन र यसले पारेको प्रभावका विषयमा हामीले इसेवाका सिओओ रोशन लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
साग जस्तो ठुलो र दर्शकको अत्याधिक चाप हुने प्रतियोगिताको अनलाइन टिकट व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
साग सुरू हुनुभन्दा अगाडिसम्म नेपालमा साग नै हुन्छ की हुँदैन भन्नेजस्तो अन्यौलता थियो । सबैको ध्यान सागका लागि भौतिक संरचनामा मात्र ध्यान थियो । रंगशाला बन्छ की बन्दैन, भिआइपी तर्फको छाना बन्ला की नबन्ला जस्ता कुरामा सबैको ध्यान थियो । तर इभेन्ट सफल बनाउन त त्यतिले मात्र पुग्ने अवस्था थिएन । रंगशाला बन्यो, छाना पनि बन्यो तर खेललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, टिकट कसरी काट्ने, कहाँबाट काट्ने जस्ता कुरामा खासै तयारी भएको थिएन ।
सबैको फोकस भौतिक संरचनामा मात्र थियो । यही क्रममा हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई प्रस्ताव राख्यौँ की अनलाइनबाट टिकट काटौँ भनेर । हामीसँग प्रविधि पनि छ, जनशक्ति पनि छ , यसभन्दा अघि पनि ठुला ठुला खेल व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि राखेप पनि सहमत भयो । राखेप सहमत त भयो तर रंगशाला बनेर सकिएको अर्कोदिन बाट त खेल नै सुरु भए । थोरै समय भएपनि त्यसलाई सफल बनाउन अनलाइन टिकटिङको काम सुरू गरियो । र अहिले हामीले सहज र सफल रूपमा अनलाइन टिकट विक्री तथा त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।
विगतमा तपाईहरूले अनलाइन टिकट विक्री तथा व्यवस्थापन गरेभन्दा त यो निकै ठुलो स्केलको गेम हो । एउटा खेल एक ठाउँमा , अर्को खेल अर्को ठाउँमा भइरहेका बेला व्यवस्थापनमा समस्या भएको छैन ?
अनलाइन टिकटिङ गर्दा दुई तिनवटा कुरा फरक छ । यसअघि पनि अनलाइन टिकटिङ नभएका त होइनन् । तर यसपाली यो स्केलमा अन्तराष्ट्रिय खेलको सिरिज पहिलो पटक हो । त्यो पनि मल्टीपल खेल मैदानमा मल्टीपल खेलको व्यवस्थापन भइरहेको छ । यति ठुलो स्केलमा अनलाइन टिकट व्यवस्थापन अहिलेसम्म भएको थिएन । अर्को दशरथ रंगशालामा अहिलेसम्म अनलाइन टिकटिङ भएको थिएन । यसपाली रंगशालामा रहेका सिटमा सिट नंम्बर नै राखिसकेपछि सहज भएको छ । त्यस्तै रंगशालाका प्याराफिटमा विभिन्न जोनहरु रहेका छन् । टिकटमै सिट नम्बर आउने भएकाले आफ्नै सिटमा बस्न पाउनुहुन्छ ।
अनलाइन सेल्स गर्ने बित्तिकै ४–५ वटा समस्यालाई त अटोमेटिक रूपमा समाधान गरिदिएको छ । एउटा त पारदर्शीता आयो । यसले रियल टाइममै कति टिकट विक्री भयो, कति रकम उठ्यो भन्ने कुरा देखिन्छ । अर्को भनेको प्रवेश व्यवस्थापन । विक्री गरेर मात्र त भएन । कति दर्शक छिरे, कति छिर्न बाँकी छ । टिकट काटेका सबै मानिस छिरे कि छिरेनन् भन्ने जस्ता हरेक कुराको डाटाबेस हामीले रियलटाइममै हेर्नसक्छौँ । अर्को कुरा हामीसँग प्रविधि र दक्ष जनशक्ति पनि छ । त्यसैले मास भोल्युममा काम गर्नुपरेपनि सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ ।
यस किसिमका खेलमा एकातिर टिकटिङको कुरा भइरहँदा अर्कातिर खेल हेर्ने पासको विषयमा पनि विवाद सिर्जना भइरहेको पाइन्छ । पावर हुनेहरुले पास माग्ने, या पास धेरै बाँढेर दर्शकले स्थान नपाउने समस्या पनि हुन्छ नी, पास व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हो, खेलको कुरामा जहिले पनि पासको विषयमा लफडा भइरहेको हुन्छ । कति पास पाउने, कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कसरी दिने भन्ने कुरा जहिलेपनि आयोजकलाई समस्या भइरहेको हुन्छ । यसपाली आयोजकले के बोल्ड डिसिजन गरिदिनुभयो भने पास भनेको प्लेयर र अफिसियलले पाउने बाहेक अरुलाई पास नै नदिने निर्णय गरिदिनुभयो । यसले एउटा त व्यवस्थापनमा सजिलो भयो अर्को पास दिनै पर्नेहरुको हकमा पनि खेलाडी, अफिसियल पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि नाम नै राखेर हरेक गेमको लागि पास दिइयो ।
वान पास फर अल गेम होइन की हरेक गेम, हरेक इभेन्टको लागि छुट्टाछट्टै पास दिने काम गरिएको छ । र पास वालाहरूको पनि क्युआर मेसिनले स्क्यान हुने व्यवस्था गरिएको छ । पास पाउनेहरुको पनि सिट नम्बर पासमै लेखिएको हुनाले व्यवस्थापन सहज भयो । यसो गर्दा सबैले पास माग्न पनि सकेनन् र पास पाएकाले पनि अर्कोलाई ट्रान्स्फर गर्न सकेनन् । किनभने नाम नै त्यसमा उल्लेखित भइसकेपछि आफै आउनु पर्यो । अर्को कहाँ बस्ने भन्ने कुरापनि बन्दोवस्त भयो ।
तपाईले सहज रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ भनिरहेका बेला पानी खान निस्कन नपाइएको, पानी पनि उपलब्ध नभएको भन्नेजस्ता कुरा बाहिर आएका छन् नि ?
तयारी गर्ने समय अत्यन्त कम भयो । हामीले आयोजकसँग मिलेर अझै केही गर्न सक्ने ठाउँ थिए । जस्तै कुन चिज लैजान पाउने, कुन नपाउने भन्ने कुरा हामीले कम्युनिकेट त गरेका छौ तर कहीँ केही ग्याप देखिएका छन् । तपाईले भनेजस्तै मानिस भित्र गेम हेरेपछि पानी खान बाहिर आउन पाएन भन्ने गुनासो सुनियो । यो विशेषगरी अत्याधिक दर्शक हुने फुटबल खेलमा सुनिएको गुनासो हो । पहिलो खेलमा यो गुनासो आइसकेपछि हामीले दोस्रो खेलदेखि इसेवाले नै निशुल्क पानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ । यो भनेको हामीले आफ्नो तर्फबाट एक लेभलको सपोर्ट पनि गरेका हौँ ।
एकातिर सहजै अनलाइन टिकट काटेर आउने संख्या देखियो भने कतिपय व्यक्ति विगतमाजस्तै रंगशालामै आएर टिकटका लागि हुल हुज्जत गर्ने प्रयास गरेको पनि देखियो ? कति दर्शक अनलाइनबाट टिकट काटेर आउनुहुन्छ ?
अनलाइन टिकटिङमा दर्शकको रेस्पोन्स् एकदमै राम्रो छ । मानिसहरू सिस्टममा बस्न रूचाउँछन् । प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहान्छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ यो सागबाट । खेल हेर्न आउँदा अनलाइनबाट आफै टिकट काटेर आउनेको संख्या बढि छ । दुई खेलमा हाम्रो १० हजार भन्दा बढि टिकट त अनलाइनबाटै सेल्स भएको छ । अहिले सिट क्षमताको हिसाबले सर्बसाधारण प्याराफिट तर्फ १२ हजार ६ सय र भिआइपी तर्फ २८ सय हाराहारीमा क्षमता हो । त्यसमध्ये केही सिट भिभिआइपीलाई छुट्याइएको हुन्छ । जहाँ टिकट विक्री हुँदैन । यो हेर्दा हाम्रो रंंगशालाको सरदर क्षमता भनेको १५ हजारको हो । तर पदाधीकारी, आयोजक, खेलाडीहरु नै भए , पूर्व खेलाडीहरू लगायतलाई तोकिएका सिट छोद्दा हामीले टिकट बेच्ने भनेको १२ हजार मात्र हो । त्यसमा अहिले हाम्रो दुईवटा गेम भयो फु्टबलको । दुईवटै दिनमा सार्बजनिक बिदा नभएपनि दर्शकको उत्साह राम्रो थियो ।
पहिलो खेलमा ६ हजार टिकट विक्री भएकोमा ४२ सय जनाले अनलाइन टिकट काट्नुभएको थियो भने दोस्रो गेममा ७१ सय टिकटमा ५८ सय जना अनलाइनबाट टिकट काटेर आउनुभयो । यो हेर्दा जो पहिले गेटमै आएर टिकट काट्नुभयो । उहाँले त्यहाँको भिड र समस्या देखेपछि दोस्रोमा अनलाइनबाट टिकट काटेर आउनभएको छ । अनलाइनबाट टिकट उत्साहजनक ढंगबाट काट्नुभएको छ दर्शकले ।
शनिबार पनि नेपालको खेल रहेको छ । बिदाको दिन भएकाले टिकट विक्रीको अवस्था कस्तो छ ?
शनिबार बिदा भएकाले दर्शकको संख्या अन्य दिन भन्दा अत्याधिक हुन्छ । अनलाइनबाट टिकट काट्नेको संख्या हेर्दा टिकट सोल्ड आउट हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । बिदाको दिन छ । धेरै दर्शकले टिकट काटि सक्नुभएको छ । अब राम्रो राम्रो जोनको टिकट त केही सिमित मात्र बाँकी छ । यसोे हुँदा संभवत हामीले भोली डोर सेल ( रंगशालामै टिकट विक्री) गर्नै पर्देन । गर्नै परेपनि अत्यन्त न्यून सिट हुन्छ । त्यसैले म दर्शकहरूलाई समयमै टिकट काटी आफ्नो सिट बुक गर्न आग्रह गर्छु ।
अर्को हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको भनेको गेटहरूको व्यवस्थापन हो । रंगाशाला छिर्ने हामीले पाँचवटा गेट खोलेका छौँ । पाँचवटा गेटमा कुन एरियाबाट को जाने भन्ने कुरा व्यवस्थित् बनाएका छौँ । हरेक गेटमा ठुलो संख्यामा हाम्रो टिम परिचालन भएको छ । जसले क्यूआर मेसिनबाट स्क्यान गरी रियल टाइममा चेक गर्छ र प्रवेश गराउँछ । त्यसमा टिकटमा उल्लेखित नाम र परिचयपत्र एउटै व्यक्तिको हो की होइन भन्ने कुरा चेक गरिन्छ । दर्शकहरु कतिजना छिरे र कति छिर्न बाँकी छ भन्ने सम्मको रेकर्ड हामीसँग हुन्छ ।
दर्शकको अत्याधिक चाँपका कारण रंगशालामा अवाञ्छित गतिविधि हुने, तोडफोड हुने गरेका जस्ता विगतका तिता घटना पनि छन् । अनलाइन टिकटिङले यस्ता गतिविधि नगराउन कस्तो भूमिका खेल्छ ?
बिगतमा टिकट नपाएर, पाएर पनि छिर्न नपाएर यस्ता गतिविधि भए होलान् । तर त्यतिबेला अवाञ्छित गतिविधि गर्नेको पहिचान गर्न पनि मुस्किल हुन्थ्यो । हामीले यस्ता गतिविधि नहुनेगरी व्यवस्थापन गरेका छौँ । तोडफोड गर्ने, भौतिक संरचना बिगार्ने,होहल्ला गर्ने जस्ता गतिविधि रोक्न सकिने म्याकेनिजम हामीले बनाएका छौँ । किनकी यसपाली हामीले हाम्रा सबै दर्शकलाई चिनेका छौँ । को दर्शक आउनुभएको छ, कुन सिटमा बस्नुभएको छ भन्ने कुरा सबै कुराको रेकर्ड हुन्छ ।
सिसिटिभी त हुने भइहाल्यो, हामीसँग को कहाँ बसेको छ भन्ने रेकर्ड हुने भएकाले अवाञ्छित गतिविधि हुँदैनन्, भएपनि हामीले तत्कालै पहिचान गर्न सक्छौँ । विदेशमा कसैले स्टेडियममा आएर सिट तोडेमा, हुलदंगा गरेमा उसलाई २ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने नियम हुन्छ । भोली राखेप या अन्य आयोजकले यस्तो गर्न चाह्यो भने यो गर्न संभव छ । हाम्रो खेल हेर्न को आउँदैछन्, को आए भन्ने जानकारी हुने भएकाले ट्याक गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले यस्ता समस्या निराकरण गर्न अनलाइन टिकटिङको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ ।
तपाईहरुको एजेन्ट नेटवर्क कति बलियो छ ? दर्शकले सहजै अनलाइनबाट टिकट पाउन सक्छन् ?
इसेवाका २५ लाख भन्दा धेरै ग्राहक छन् । ६० हजार भन्दा धेरै एजेन्ट नेटवर्क छ । तपाईले सजिलै टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । इसेवा एकाउन्ट नभए कुनैपनि इसेवा जोन पोइन्टबाट सहजै टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । तपाईले अरूका लागि टिकट काटिदिएपनि उहाँको नाम र नम्बर हालिसकेपछि उहाँकै मोबाईलमा म्यासेज तथा उहाँकै मोबाईल एप्स्मा टिकट जान्छ । तपाई टिकट नबोकेपनि फरक पर्दैन । तपाईसँग इसेवा एप्् छ भने तपाईले टिकट नबोकेपनि हुन्छ । हामीले त्यहीँ स्क्यानमार्फत तपाईको पहिचान गछौँ ।
दर्शकको चाप अत्याधिक हुन्छ । टिक अनलाइनबाट विक्री हुने भएकाले धेरै दर्शकले टिकट काटिसक्नुभएको छ । त्यसैले टिकट रंगशालामा आएर होइन आफ्नो इसेवा एकाउन्ट छ भने आफ्नै मोबाईलबाट काट्नुहोस् । यदि इसेवा एकाउन्ट छैन भने घर नजिक रहेका इसेवा जोन तथा पोइन्ट, अथवा इसेवा अंकित कुनैपनि साइबर, कम्युनिकेशन देखि किरानापसलसम्मबाट टिकट खरिद गर्न पाइन्छ । रंगशालामै टिकट काट्ने बानिले रगशालामा भिडभाड हुने, लाठिचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । अहिले त त्यो छैन । रंगाशालामा टिकट नपाइन सक्छ । त्यसैले समयमै टिकट काटेर आफ्नो सिट सुरक्षित गरौँ ।